Israel: Raysul Wasaare Benjamin Netanyahu oo laga mudaaharaaday – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Israel: Raysul Wasaare Benjamin Netanyahu oo laga mudaaharaaday
A warsame 8 March 2015
Mareeg.com: Kumanaan reer Israel ah ayaa maanta oo axad ah ku debadbaxay caasimadda dalkaas ee Tel Aviv, iyagoo kasoo horjeeda siyaasadaha R/wasaarahooda, Benjamin Netanyahu.
Booliska ayaa sheegay in dadka debadbaxa dhigay ay ka badan yihii 25 kun oo ruux, halka dadkii soo qabanqabiyey ay leeyihiin waxeyba dhanyihiin labo jibaarka tirada boolisku sheegay.
Dror Ami oo ka mid ah dadkii soo qabanqaabiyey debadbaxaas ayaa warbaahinta u sheegay iney doonayaan in wax laga badelo siyaasadda Israel, islamarkaana la galo heshiiyo nabadeed.
“Xukuumadda haatan jirta waxey ku fashilantay dhinacyada dhaqaalaha iyo arrimaha bulshada, amaankana waxba kama qaban, waxaan rajeynayaa iney xukunka kusoo laabtaan Xisbiga Garabka Bidix” ayuu yiri Dror Ami.
Debdaxbaxaan waxaa soo abaabulay koo loogu yeero “Milyan gacmood” oo u ololeysa heshiis nabadeed oo dhexmara Israel iyo Falastiin iyo in la helo dowlad madax banaan oo Falastiiniyiintu leeyihiin.
RW Cumar oo sheegay in dowladda Soomaliya la wareegeyso qarashka shirka Dhuusa Mareeb